Zavatra tokony hatao any Belfast | Vaovao momba ny dia
Rehefa mieritreritra isika Irlandy I Dublin no tanàna voalohany tonga ao an-tsaina, sa tsy izany? Avy eo isika dia mety hieritreritra ny fizaran-tany Connemara, ny morontsiraka mikitoantoana, ny morontsiraka, na ireo havoana maintso.
fa Belfast misy toerana mankany amin'ny lisitrao ve? ny renivohitr'i Irlandy Avaratra mihoatra lavitra noho ny tanàna be korontana io, zavatra volondavenona ary misy tantara mampalahelo. Nandritra ny fotoana fohy dia teraka indray izy ary androany dia atolotra ho toerana fizahan-tany mahaliana tokoa izy io. Andao hojerentsika izay ananan'i Belfast, renivohitr'i Ulster ho antsika.
2 Inona no mahasarika hitsidihana an'i Belfast
Milaza amintsika izany ny tantara ny faritanin'i Belfast dia nonina hatramin'ny vanim-potoana varahina ary ny faharavana taloha dia hita eny ivelan'ny tanàna ho vavolombelona. Nandritra ny Moyen Âge dia tsy tanàna manan-danja izy io, fa tanàna kely fotsiny izay nahitana fananganana lapa maro nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Fa ahoana no niainan'ny anglisy teto? Mora, "namboly" azy ireo izy ireo. Amin'ny alàlan'ny dingana antsoina hoe Fambolena Ulster ny satro-boninahitra anglisy dia nanetsika olona an-jatony, Protestanta ary Skoto anglisy, ary nitondra azy ireo teto. Tao anatin'ireo taonjato manaraka dia nitombo ny tanàna ary nanjary indostrialy hatrany, tadidio fotsiny fa tao amin'ny tokotanin-tsambon'i Belfast no nananganana ny Titanic.
Taty aoriana, ny tantaran'ny fahaleovan-tena Irlandey dia nizara ny tanàna sy tamin'ny taona 20 dia lasa renivohitr'i Irlandy Avaratra izy. Tsy nijanona ny olana ary izany no antony nahatonga ny tanàna hanana tantara mahatsiravina amin'ny fanafihana sy ady. Ary lazan'ny tanàna volondavenona sy malahelo.
Inona no mahasarika hitsidihana an'i Belfast
Heveriko fa hevitra tsara ny hanombohana amin'izay rehetra misy ifandraisany amin'ny Titanic. Hain'ilay tanàna ny manararaotra ny fifandraisany amin'ilay sambo mba hahafahanao manomboka Titanic Belfast satria dingana avy eo afovoany izy io.
Manaitra ilay trano, misy rihana enina ary miaraka aminy galeria mpandika teny sivy amin'izay ianao dia afaka mahita, mahatsapa, manimbolo ary mandre ny tantara rehetra momba ilay sambo malaza, fa koa ny an'ny tanàna nananganana azy sy ireo lehilahy nanamboatra azy. Tsy misy fitsangatsanganana voatondro, mandeha irery ianao ary Nofaranana tamin'ny fitsidihana ny sambo White Star Company sisa tavela, ny SS Nomadic.
Ny tapakila isaky ny olon-dehibe dia mitentina £ 17 ary ao anatin'izany ny fitsidihana ny Nomadic, fa 7, 50 ihany no azonao aloa raha misoratra anarana ianao Titanic Belfast Late Saver Ticket hanao ny fitsidihana adiny iray monja alohan'ny hikatonany. Ary raha te hanana dite amin'ny rendrarendra ianao dia azonao atao amin'ny alahady tolakandro izany amin'ny kopian'ny sambo miaraka amin'ilay tohatra malaza, mandritra ny 24 pounds.
Ary manana manintona roa hafa mifandraika amin'ny Titanic aho: azonao atao ny manandrana ny menio ny sambo, ny farany notompoina tamin'ny alina nahatsiravina, nisoratra anarana ho an'ny Sakafo tsy miankina manokana, ao amin'ny Rayanne House, na manao a mitaingina sambo mamaky ny seranana ary jereo ny toerana namboarina sy namboarina ary natomboka ny sambo.
Miala amin'ny tantaran'ny sambo sambo malaza indrindra dia mila mitsidika ny tanàna hankasitraka azy ianao. Afaka manofa bisikileta ianao ary miditra ao amin'ilay Fitsidihana bisikileta Belfast City, miaraka amin'ireo mpitari-dalana eo an-toerana izay mitondra anao any amin'ny isa mahaliana 30 mijanona amin'ny asabotsy sy alahady amin'ny 10 ora maraina amin'ny vidiny £ 20 isan'olona. Atolotry ny bisikiletan'i Norm izy ireo.
Mazava ho azy fa azonao atao ihany koa ny manao fitsidihana fiara fitateram-bahoaka mahazatra roa, ny Belfast Sightseeing hop on-hop eny. Manana tapakila 48 ora izy ary azo ampiharina. Mandritra ny familiana dia azo antoka fa handalo ny iray amin'ireo trano malaza indrindra ao Belfast ianao: ny Town Hall.
Izy io dia fananganana kanto avy amin'ny 1906 izay ahafahanao manao a fitsidihana maimaim-poana. Ary tsy tokony hanadino ny Trano Belfast: Eo amin'ny havoanan'i Cavehill Country Park any amin'ny 120 metatra ny haavony ary manana fahitana mahafinaritra momba ny farihy sy ny tanàna. Afaka mihinana ao amin'ity trano be vato kanto ity aza ianao, misokatra isan'andro ny trano fisakafoanana manomboka amin'ny 11 maraina ka hatramin'ny 5 hariva ary hatramin'ny 9 alina manomboka ny alakamisy ka hatramin'ny asabotsy.
Raha tianao ny miaina ny tanàna dia afaka mandalo izany ianao Tsenan'i St. George nanomboka tamin'ny faran'ny taonjato faha-20 na dia efa niasa hatramin'ny taonjato faha-8 aza Ny zoma, asabotsy ary alahady dia misokatra ny foara ary iray amin'ireo toerana tsara indrindra an-tongotra, hijerena, hiantsenana ary hiarahana amin'ny olona eo an-toerana. Misy bisy maimaimpoana mandeha isaky ny XNUMX minitra eo anelanelan'ny tanàna sy ny tsena, manomboka amin'ny XNUMX maraina.
Kely kokoa nandia fa mahaliana koa ny Fonjan'i Crumlin Road, fonja tamin'ny 1846 izay niasa nandritra ny zato taona sy sasany. Lehilahy mpanao heloka bevava no nonina nonina io nefa koa gadra politika ary nisy ny fitsoahana, fanambadiana, fahaterahana, fikomiana ary famonoana ho faty.
Maharitra 70 minitra ny fitsangantsanganana mitarika ary misokatra isan'andro ny toerana afa-tsy daty vitsivitsy. 9 kilao ny vidiny. Mba hifandraisana bebe kokoa amin'ny politika sy ny tantara dia manoro hevitra anao aho hanao a fitsangatsanganana anaty taxi-be, ireo taksibe anglisy mahazatra. Mitondra anao hahafantatra ilay malaza sary hosodoko amin'ny ady izay Belfast koa dia malaza amin'ny.
Ary ankehitriny eny, ho fantatrao izany anio Ady amin'ny seza fiandrianana no voarakitra eto koa misy sampan-draharaha maromaro manolotra mandeha amin'ny andiana firaketana: Ny tobin'i Robb, Winterfell, ilay Abbey efa rava taloha izay nianianan'i Robb ny tsy fivadihany tamin'ny Mpanjakan'ny Avaratra, ilay ala tranainy izay ahitan'ny Sticks amboadia maty sy ny zanany, ary maro hafa.
Matetika manomboka amin'ny 8:30 maraina ny fitsangatsanganana, asio fiatoana hisakafoanana antoandro ary vita amin'ny 6 hariva. Tolotra fitsidihana hafa mitsidika Castle Ward, Winterfell, 40 minitra miala ny tanàna dia ampindramin'izy ireo akanjo ianao ary manana ianao kilasy zana-tsipìka mahay ary manao ny fitsidihana ny napetraka amin'ny bisikileta.
Misy fitsangatsanganana roa hatao: ny Robb's Trail sy ny Tywin's Trail, adiny iray sy fahefatra ho an'ny voalohany, adiny roa ary ampahefatry ny faharoa, samy misy fijanonana 20 ary mitentina £ 27 isaky ny olona. Ary mbola misy hafa koa, Afaka mandany ny alina any an'ala Winterfell ianao amin'ny vidiny £ 195 isaky ny mpivady.
Raha avy ny orana dia azonao atao, mitsidika ny Studios Titanic maoderina goavambe izay an-tsoratra ihany koa ny andiany HBO. Araka ny hitanao dia misy looooooong ny Titanic sy ny Game of Thrones.
Ary farany, raha te-hanatrika hetsika ianao, fisavana, tsena, fety, lazaiko anao fa Belfast dia mpampiantrano mandritra ny taona. Miankina amin'ny fotoana handehananao daholo izany, fa amin'ny Krismasy dia mampirehitra jiro maro ary misy tsena ao amin'ny lapan'ny tanàna izay tsara tarehy, amin'ny Halloween dia misy afomanga ary mikarakara Herinandro fisakafoanana amin'ny volana Oktobra aza.
Ny marina izany raha mankany Dublin ianao dia tsy misy antony tsy hitsidihana an'i Belfast satria ny halaviran'ny tanàna roa tonta dia mihoatra ny 160 kilometatra. Azonao atao mandeha lamasinina na bus, fa ilay teo aloha kosa dia fitaovana fitaterana lafo kokoa. Bus Eireann sy Ulsterbus no orinasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Irlandy » Zavatra hatao any Belfast
Ity no hotely Cristiano Ronaldo any Portugal